" စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာနဲ့live saleလုပ်နေတဲ့ကင်ဆာရောဂါသည် မနွယ်နီကို စျေးကူညီရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ Live sale ဘုရင်မနှိုင်းယှဥ်'' - Cele Gabar
” စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာနဲ့live saleလုပ်နေတဲ့ကင်ဆာရောဂါသည် မနွယ်နီကို စျေးကူညီရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ Live sale ဘုရင်မနှိုင်းယှဥ်”
By KoePosted on June 22, 2022
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်မနွယ်နီကိုအားလုံးပဲ သတိထားမှတ်မိကြမှာပါ။ကင်ဆာဝေဒနာကိုခံစားနေရပေမယ့် အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ပေမယ့်လည်း အခုလိုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတဲ့ကာလမှာ live saleလေးတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေပေမယ့်လည်း ထင်သလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့မာတော့ Live sale ဘုရင်မလို့တောင်တင်စားခေါ်ရတဲ့ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်ကတော့ မနွယ်နီရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကို တလေးတစားသတိတရနဲ့ အကူအညီပေးမယ့်အကြောင်းကို”မနွယ်နီနှိုင်းရှင်တို့လိုပဲ ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်
ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ခလေးတဖက်နဲ့ ဘဝကိုအရှုံးမပေးအစ်မကို အရင်က နှစ်ကြိမ်ကူညီခဲ့ဖူးပေမယ့်ခုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလုပ်တွေကြားထဲပိနေသူမို့ အစ်မကို ထပ်ကူညီဖို့ သတိလွတ်ခဲ့တယ်….
သူ့ page လေး ဈေးရောင်းကောင်းပီး Viewer တက်အောင် သွားကူညီ ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်
သဘောထားပီး မလျှော့ပဲ ဆက်လျှောက်ပါနော်💪💪💪”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းနှိုင်းယှဥ်ရဲ့ စိတ်သဘောထားလေးကို သဘောကျမိရင်တခုခုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ႔live saleလုပ္ေနတဲ့ကင္ဆာေရာဂါသည္ မႏြယ္နီကို ေစ်းကူညီေရာင္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ Live sale ဘုရင္မႏႈိင္းယွဥ္”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္မႏြယ္နီကိုအားလုံးပဲ သတိထားမွတ္မိၾကမွာပါ။ကင္ဆာေဝဒနာကိုခံစားေနရေပမယ့္ အႏုပညာအလုပ္ေတြမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေပမယ့္လည္း အခုလိုစားဝတ္ေနေရးခက္ခဲတဲ့ကာလမွာ live saleေလးေတြျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနေပမယ့္လည္း ထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့ Live sale ဘုရင္မလို႔ေတာင္တင္စားေခၚရတဲ့ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့ မႏြယ္နီရဲ႕အကူအညီေတာင္းခံမႈကို တေလးတစားသတိတရနဲ႔ အကူအညီေပးမယ့္အေၾကာင္းကို”မႏြယ္နီႏႈိင္းရွင္တို႔လိုပဲ ဇာတ္ပို႔တစ္ေယာက္ရင္သားကင္ဆာနဲ႔ ခေလးတဖက္နဲ႔ ဘဝကိုအရႈံးမေပးအစ္မကို အရင္က ႏွစ္ႀကိမ္ကူညီခဲ့ဖူးေပမယ့္ခုေတာ့ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အလုပ္ေတြၾကားထဲပိေနသူမို႔ အစ္မကို ထပ္ကူညီဖို႔ သတိလြတ္ခဲ့တယ္….
ညကလာေျပာေတာ့ ရင္ထဲဆို႔မိတယ္….သူ႔ page ေလး ေဈးေရာင္းေကာင္းပီး Viewer တက္ေအာင္ သြားကူညီ ေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္အားမငယ္ပါနဲ႔အစ္မ….ဘယ္သူေတြႏွိမ္ႏွိမ္ အားေဆးလာတိုက္တယ္လို႔
သေဘာထားပီး မေလွ်ာ့ပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ပါေနာ္💪💪💪”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေဖာ္ျပလာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္းႏႈိင္းယွဥ္ရဲ႕ စိတ္သေဘာထားေလးကို သေဘာက်မိရင္တခုခုမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post “မိခင်ကြီးမွေးနေ့မှာ surprise ပြုလုပ်ကာ ထူးခြားတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်လေး ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသားချော နက်ရှိုင်းကို”
Next post ” သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမိုက်စားတက်တူးအသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံရေးထိုးခဲ့တဲ့အလှမယ်ဟန်လေး”